Kuzobhekwa namanye amacala kolukaNgizwe - Ilanga News
Home Izindaba Kuzobhekwa namanye amacala kolukaNgizwe
UNGIZWE Mchunu owayengumsakazi woKhozi FM ozoqhubeka nokugqunywa esitokisini ngecala lokuvubela udungunyane.
KUSABHEKWA amanye amacala angase abekwe owayengumsakazi
woKhozi FM, uNgizwe Mchunu, obevele eNkantolo yeMantshi yaseRandburg, eGauteng izolo ngoLwesithathu, ngecala lokuvubela udungunyane olushiye kubhujiwe emabhizinisini aKwaZulu-Natal nasegauteng njengoba abantu bezitapele impahla, bashisa izakhiwo.
Lolu dungunyane lwaqubuka emuva kokuba uMnu Jacob Zuma owayengumengameli waseNingizimu Afrika, wazinikela ejele ngobusuku bangoLwe-sithathu lomhla ka-7 kwephezulu, nje-ngoba wagwetshwa izinyanga eziwu-15 ngecala lokudelela umyalelo wenkantolo.
Icala likaNgizwe osazobhadla esitoki-sini njengoba ebesayobingelela ima-ntshi, lihlehliselwe umhla ka-28 kwephezulu.
I-National Prosecuting Authority (NPA), ithi inazo zonke izithombe-mnyakazo (video) ezinezinkulumo zikaNgizwe, kanti ithi kusangenzeka kwengezwe amanye amacala.
Ithe okwamanje uNgizwe ubhekene necala lokuvubela udungunyane. Kuvezwe nokuthi ezinkulumweni abezenza, umbuso ususebenzise ngisho abahumushi abazochaza igama elithi “Azikhale” ukuthi lihambelana
kanjani nezinkulumo zakhe, kwathola-kala ukuthi wayephaka impi.
Leli gama elithi, “Azikhale” bekuyisiqubulo sakhe uNgizwe ngesikhathi ethula izinkulumo.
UNgizwe waboshwa kade ezinikele ekomkhulu lamaphoyisa eThekwini ngoMsombuluko ngoba ethi usekhathe-le wukuwacashela njengoba bekuthiwa ayamfuna.
Kuvela ukuthi wafika wathola ukuthi kalikho icala avulelwe lona KwaZulu-Natal. Amaphoyisa aseThekwini athi-nta awaseGauteng, okuyiwona ayemvu-lele icala, zamkhalela.
Uzinikela nje, kuthiwa incwadi egu-nyaza ukuboshwa kwakhe yaphuma ngoLwesihlanu olwedlule.
Wazidonsela amanzi ngomsele ngokuhamba phambili emkhakasweni wo-kuba kudedelwe uMnu Zuma kanti kuthiwa izinkulumo zakhe bezigqugquzela udlame.
Waze wabiza abezindaba eGoli, wathi unika uMengameli Cyril Ramaphosa izinsuku ezintathu ukuba akhulule uMnu Zuma, uma kungenjalo kuyobe uyokubona okwabonwa nguSawuli.
I-NPA ithe uNgizwe wabalekiswa ngendiza eyisipesheli emuva kokuzwa amahlebezi okuthi ufunwa ngamapho-yisa. Ithi isola ukuthi usengakuphinda lokho.
UNgqongqoshe wamaPhoyisa, uMnu Bheki Cele – ngaphambi kokuboshwa kukaNgizwe – ubemgigiyela, ethi lokhu akwenzile ezibiza ngomengameli othu-lela izwe izinkulumo ekubeni kungaziwa ukuthi wavotelwa kuphi, kuwukudukisa izwe.
Previous articleKusolwa umona kobulawe ngumyeni
Next articleIngwadla ngezidumbu eziminyene ePhoenix